Posted by minkhantthu at 3:12 PM No comments:
မင်းကို တစ်ဆတိုး ချစ်မိတယ်
ဘာလို့ စက္ကန့်နဲ့ အမျှ ချစ်နေမိမှန်းမသိဘူး
ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေကို ပြန်တွေကြည့်တိုင်း
ငါ့ အတ္တတွေ ကျိုးကြေနေတာ
မင်ကို နားကြည်းကြည့်လို့လည်း မရဘူး ကောင်မလေး ။ ။
Posted by minkhantthu at 1:11 AM No comments:
ဘာမှ မဖြစ်တာ ဖြစ်တာ အသာထား
အရာရာ အံမ၀င် ခွင်မကျ
သူ တခုခု လုပ်ပြချင်တယ်
ပုဂ္ဂလိက ဒုက္ခ ရှင်းမရခဲ့။
ဦးဏှောက်တလုံး၊ သူ မသုံးချင်တော့
ကလေးတယောက်ရဲ့ အလေးအနက် မရှိမှုမျိုးနဲ့
တွေ့ မြင် သိ နေရတယ်လေ
အထိမခံ နိုင်တော့တာ သိနေခဲ့တယ်။
ဒီကဗျာက ရေးတာ မဆုံးဘူးထင်တယ်၊ နေ့စွဲလည်း မမှတ်မိ။
(ကျွန်တော် ကဗျာ မဟုတ်ပါ )
Posted by minkhantthu at 8:41 PM No comments:
ဆိုက်ရောက်လာမဲ့ ကံတရားကိုပဲ ယုံကြည်လိုပါ
ကံကံရဲ့ အကျိုးကို ယုံကြည်ရမယ်လေ
စေစားရာ ကံကြမ္မာကို လွန်ဆန်လို့
တာဝေးပြေးမဲ့ လူတစ်ယောက် မင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး
ဗျာများနေတဲ့ လူတစ်ယောက် ငါမဟုတ်ခဲ့ဘူးလေ
ဒါကြောင့် . .
ကြောင့်ကြမဲ့ စိုက်နေတဲ့ မင်းစိတ်တွေကို
ဘယ်လို ပန်းတိုင်မှာ အဆုံးသတ်မှာလဲ
၀မ်းသာခြင်း ၀မ်းနည်းခြင်းတွေနဲ့ပဲ နေရဖို့
နိုင်ရလိုမှု စိတ်မျိုးနဲ့တော့ မလုပ်ပါနဲ့
ရင်ဆိုင်ရမဲ့ ကံတရားကိုလည်း မျတ်ကွယ်ပြုလို့မရဘူး
စားသောက်စရာတစ်ခုကို အလွယ်တကူ မကုန်ပါစေနဲ့လို့
ပါလာတဲ့ ဗီဇနဲ့ပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကွာ ။ ။
Posted by minkhantthu at 8:31 PM No comments:
ငါ့ရဲ့ အိပ်ယာခင်းနဲ့ ခေါင်းအုံးလေးဟာ
ငါ့ရဲ့ စကားပြောဖော်ဖြစ်ခဲ့တယ် ။
ငါ့ရဲ့ ရန်သူဖြစ်ခဲ့တယ် ။
ငါ့ရဲ့ အိပ်ယာခင်း ခေါင်းအုံးလေးနဲ့
ငါ့ရဲ့ . . .
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ် ။
ငါဟာ . . . ငါဟာ . . .
တစ်ကောင်ကြွက် မင်းခန့်သူ ဖြစ်သွားခဲ့တယ် ။
Posted by minkhantthu at 8:20 PM No comments:
အားလုံး ... အားလုံးကို
အဖြူရောင် ညီမလေးရေ . . .
အကို့ ရင်ထဲက ထွက်ကျလာတဲ့ စာသားတွေကို
ပဉ္စလတ်ဆန်တဲ့ ငါတို့ ချစ်ခြင်းတရားမှာ
ငါတို့ရဲ့ တွေဆုံခွင့် နောက်တစ်နေ့
အိပ်လို့ မပျော်တိုင်း ထထကြည့်မိတဲ့
ညီမလေးကို ချစ်တဲ့ စိတ်နဲ့
အားလုံး အားလုံးကိုပေါ့ . . ။
Posted by minkhantthu at 12:47 AM No comments:
အဖြူရောင်လေးပါကွာ . . .
အဖြူရောင် လေးရေ . . .
လေပြေလေးတွေလို ထွက်ပြေးသွားတဲ့ မင်းကို
ခွဲခွါကာ နှုတ်ဆက်သွားတဲ့ ငါ့ကို
မင်းကျေနပ်ပေးပေါ့ နော် ။ ။
Posted by minkhantthu at 1:31 AM No comments:
ငါအရာအားလုံးကို မင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ နေ့ရက်တွေ ဖြစ်ခဲ့သလို
ဇော်ဂျီ မြစ်ကြီး သက်သေရှိခဲ့တယ်
စိမ်းလဲ့လဲ့ လယ်ကွင်းပြင်တွေလည်း သက်သေရှိခဲ့တယ်။
အနိုင်ယူချင်သူ ညီမလေးရေ . . .
မှားမှန်းမသိသလို မှန်မှန်းလဲ ငါမသိခဲ့ဘူး
အရာရာကို လျစ်လျှူရှု့ ဥပေက္ခာပြုခဲ့တဲ့ ငါ့အတွက်
(မှတ်ချက် - ကဗျာ အဆုံးမသက်ရသေးပါ ) မျှော် . . .
Posted by minkhantthu at 1:17 AM No comments:
က- ကလုန်း အကြောက်ဆုံး
ခ- ခလုတ်တိုက် သတိငိုက်
ဂ- ဂဏန်း စွေကန်းကန်း
င- ငထွေးရူး ထန်းရည်မူး
စ- စပုရိန် လိန်တိန်တိန်
ဆ- ဆလံ ပြရပြန်
ဇ- ဇလုံကြီး အ၀တီး
ည- ညကမှောင်မှောင် ခွေးတွေဟောင်
တ- တယောအို အသံချို
ထ- ထမီ ရှားလေပြီ
ဓ- ဓနုပြည် အလွန်စည်
န- နနွင်းရောင် ၀ါကြောင်ကြောင်
ပ- ပလုံ ပိုက်ဆံကုန်
ဖ- ဖရိန်စောင်း ကြည့်မကောင်း
ဗ- ဗလီတတ်သံ အလွန်ညံ
ဘ- ဘရာစီယာ ဆိုဒ်စုံလာ
မ- မမုန်းနဲ့အုံး အချစ်ဆုံး
ရ- ရလေလိုလေ အိုတစ္ဆေ
လ- လမင်းပုံရိပ် အေးချမ်းနိမိတ်
၀- ၀တုတ်ကြီး အဲလက်(ပ်) ညဉ်း
သ- သဇင် ပန်းတော်ဝင်
ဟ- ဟတဲ့နေရာ ပြန်စေ့ပါ
အ- အမွေရ ပျော်သဟ
Posted by minkhantthu at 8:37 PM No comments:
အဖြူရောင် သံစဉ်တွေနဲ့အတူ ရစ်ဖွဲ့ထားတဲ့
ငါဟာ ချောကလပ်မလေးအပေါ်မှာ ရိုးသားခဲ့ပါတယ် ။
ဥပေက္ခာ နက္ခတ်တွေနဲ့ တုန့်ပြန်ပေးလိုက်တယ် ။
ထားပါတော့လေ . . .
လမ်းခွဲကြစို့ ဆိုတဲ့ (16.8.2012) 8း26 မနက်က ဒဏ်ရာ
နာကျင်မှုတွေနဲ့အတူ (ခုချိန်အထိ) နာကြင်နေပေမယ့်
ငါမှားလား . . ? . . . ငါမမှားခဲ့ပါဘူး
ပဉ္စလတ်ဆန်တဲ့ ကံကြမ္မာကိုတော့ ငါမုန်းတယ်
ကျရှုံးခဲ့တာကိုပဲ ငါရင်နာတယ် . . .
ရင်ထဲက ဒဏ်ရာ ခုချိန်ထိ သွေးမတိတ်ခဲ့ဘူး
ငါ့ရဲ့ ခြေလှမ်းတွေ ရှေ့မရောက်ခဲ့ဘူး
ငါ . . ၀န်ခံပါရစေ
ဒါကြောင့် . . . အခုချိန်အထိ
ငါ့ရဲ့ အပြာရောင် ဒိုင်ယာရီကို
လိမ်းခြယ်နေအုံး မှာပါကွာ ။ ။
Posted by minkhantthu at 1:00 AM No comments:
၀မ်းနည်းခြင်း ပူဆွေးခြင်းတွေနဲ့ အဆုံးသက်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသည်းကွဲသောနေ့ ကဗျာရေး
ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၅) မဖြစ်ချင်ပါ။
နောက်ဆုံး . . .
ရက်ရာဇာပဲ ဖြစ်ချင်တယ် ။
Posted by minkhantthu at 1:21 AM No comments:
တွန့်ကြေနေတဲ့ အိပ်ရာကို ဆွဲဖြန့်မိတော့
မသိုးမသန့် အိပ်မက်တွေကို တွေ့ရ
ကဗျာကလွဲပြီး အားလုံးကို ချထားခဲ့မယ်
ဘ၀ကို အဲဒီလို ရွေးသဲ့ကောက်ယူခဲ့ရာ
တစ်နေ့ထက်တနေ့ ပိုပို သဲလာတဲ့ မိုးပေါက်များ
တစ်နေ့ထက်တနေ့ ပိုပို မည်းလာတဲ့ စိတ်အထည်များ
တစ်နေ့ထက်တနေ့ ပိုပို ရဲလာတဲ့ အနာတရများ
တစ်နေ့ထက်တနေ့ ပိုပို ပြဲလာတဲ့ အဖားအထေးများ
တစ်နေ့ထက်တနေ့ ပိုပိုကျဲလာတဲ့ ဆက်ဆံရေးများ
ညရှုခင်းကို ကြယ်တွေဆီက ဝယ်မိတယ်။
Posted by minkhantthu at 1:23 AM No comments:
ကိစ္စအထွေအထူးမှမရှိတာ .. ကြယ်တွေကိုငေးနေပေါ့ ညီမလေးရီတာကပြောတယ်
တယ်လီဖုန်းအဆက်အသွယ် အဖြတ်အတောက် အပိတ်အဆို့
မိုဘိုင်းလ်စာပို့စနစ်ဟာ ရူးနေပြီ ကိုယ်ဒီနေ့မပျော်ဘူး ညီမလေးရီတာ
ပို့လိုက်တယ် ကိုယ့်ဆီပြန်ရောက်လာတယ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ
ညီမလေးရီတာ ရယ်နေမှာ ကိုယ့်ကြေကွဲမှုဟာပင့်ကူမျှင်တွေလို လွယ်လွယ်ကူကူ ပြတ်ကျသွားမှာ
ထပျံသွားတဲ့ ခိုအုပ်ထဲ .. ကိုယ်ကအလန့်တကြား လိမ္မော်ရောင်
Chat Box ထဲက ထွက်ကျလာတဲ့ အထီးကျန်ပိုးမွှားတွေ ကိုယ့်လက်ဖျံရိုးထဲ တရွရွှ
ကိုယ်က ကိုယ့်လက်မောင်းသွေးကိုယ် ပြန်ဖောက်ထုတ်ပြီး တဆစ်ဆစ်နာကျင်နေတဲ့ လိမ္မော်ရောင်အစိုင်အခဲ
ကိုယ် စိတ်ပျက်လက်ပျက်အိပ်နေလိုက်တယ် ကိုယ် ဘာမှမမြင်ရဘဲလျှောက်သွားနေတယ်
ဟာသပဲ သိပ်ရယ်ရမှာပဲ ကိုယ်သိပါတယ် ညီမလေးရီတာကတော့ ရယ်နေမှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကြုံရင်ပြောတာပေါ့
ကိုယ် တိတ်ဆိတ်သွားတယ် ညီမလေးရီတာဟာ မျက်လှည့်ဆရာပဲ
နေအပူကိုအမှောင်ချတယ် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအမှောင်ချတယ် ကိုယ်တွေးနေတာကိုအမှောင်ချတယ်
သူ့ကိုယ်သူလည်း အမှောင်ချတယ် ပြီးတော့ … စနေနေ့တစ်နေ့လုံးကို ဖျောက်ပစ်လိုက်တယ်
ညီမလေးရီတာ ကိုယ့်ကိုပြုံးပြလိုက်သလား ကိုယ်ခေါင်းငုံ့ချလိုက်သလား အရောင်တွေက ကိုယ့်ကိုလှောင်ပြီးကြည့်နေကြသလား
မရယ်ပါနဲ့ ညီမလေးရီတာ ကိုယ်သွားမှာပါ ကိုယ်ဝမ်းနည်းနေလို့ပါ
ညီမလေးရီတာ ကိုယ့်နောက်ကျောမှာရှိနေတယ် ကိုယ်ပြန်ခဲ့တယ်
ရယ်သံတွေရယ် ကိုယ်ရယ် ညီမလေးရီတာရယ် ခရီးကတစ်လမ်းတည်း
ကိုယ်ပြောပြနေကျရယ်စရာတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုတစ်တန်းထဲထားပြီး ညီမလေးရီတာရယ်နေမှာ
ကိစ္စအထွေအထူးမရှိပါဘူး လမ်းကြုံလို့တွေ့တာ ညီမလေးရီတာကတော့
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရယ်နေမှာ …. ခရီးသွားဟန်လွှဲ ။ ။
Posted by minkhantthu at 1:18 AM No comments:
အမေသာ . . .
မေမေရဲ့ . . .
သားရဲ့ ညီလေး ညီမလေးလည်းရှိသေးတာပဲ
သားလေ . . . တစ်ယောက်တည်း
အခုလေ . . . တစ်ယောက်တည်းပါပဲ
အမေ့ရဲ့ အရိပ်တွေကို အားပြုလို့
မေမေရယ် . . .
ဒါပေမယ့် မေမေရယ် . . .
မေမေအတွက် ဖြစ်စေခဲ့ ပေမယ့်
ငယ်ငယ် ကတည်းက သင်ပေးခဲ့တဲ့ မေမေကို
အခု ဆိုရင် . .
သားမျတ်ရည် ကျမိတယ် မေမေ
သားလေ . . .မျတ်ရည်တွေ ခမ်းခြောက်စေချင်ပြီ
မေမေ ဆိုတာ သားရဲ့ ဘ၀တစ်ခုပဲ မေမေ
ဒါကို . . .
အမေ နောင် ဘ၀က ခွင့်လွတ်ပေးပါမေမေ
သားကို တစ်ခုပဲ . . .
သားတို့မေမေ ဖြစ်ခွင့်ပေးပါမေမေ ။ ။
Posted by minkhantthu at 7:40 AM No comments:
ချိုသာတဲ့ မင်းရဲ့ အပြုံး
ကြင်နာတဲ့ မင်းရဲ့ စကားတွေကြား
ယောက်ျားလေး တစ်ယောက်ရဲ့ မာနဆိုတာ
ဒါပေမယ့်ချစ်သူ . . .
ချစ်မိတဲ့ ငါ့အသည်း တိတ်တိတ်ကလေး
အချိန် အတော်ကြာ သိမ်းထားရအုံးမှာပေါ့ ။ ။
အချိန်အတော်ကြာ သိမ်းထားရအုံးမှာပေါ့ ။ ။
Posted by minkhantthu at 7:51 AM No comments:
အဖြူရောင် နှလုံးသား (1 .7. 2012 )
ပျော်နေပါစေ ငါ့ရဲ့ ညီမလေး
မင်းနောက်လှည့် မကြည့်ပါနဲ့ ။ ။
Posted by minkhantthu at 6:54 AM No comments:
ဖယောင်တိုင် လူသားတွေကိုပေါ့ . . ။
Posted by minkhantthu at 2:54 AM No comments:
ပျော်စရာ စကားလုံးတွေကို ဖန်တီးရင်း
အဲဒီ အကျင့်တွေရဲ့ အဆုံး
ဒီလိုပဲ အကျင့်တွေနဲ့ နပန်းလုံးရင်း
ငါ့ရဲ့ ကိုယ်စိတ် နှစ်ပါးလုံးရဲ့
အကောင်းဆုံး မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့တယ် ။ ။
Posted by minkhantthu at 11:55 PM No comments:
အမှန်တရား ကင်းမဲ့တဲ့ နေရာမှာပဲ ရှိနေပြန်သေးတယ် ။
Posted by minkhantthu at 12:08 AM No comments:
မိန်းလက်နက် (၅) ဖြာ
၁ ။ ပါးစပ်သေနက်
မိန်းမတို့ရဲ့ မွေးရာပါလက်နက်ပါပဲ– သမီးရည်းစား ဘ၀မှာ သိပ်မသုံးတက်ကြဘူး ။ အိမ်ထောင်ရှင်ဖြစ်မှ ထုပ်သုံးကြ တာ — တစ်အိမ်လုံးကိုစက်သေနက်နဲ့ မွှေသလို မွှေတက်ကြတာ ။ အိပ်ရင်တောင် ကျည်ထိုးမောင်းတင်ပြီးမှ အိပ်တက် ကြတာ ။ တစ်ရေးနိုး ထပစ်ရင်တောင် ပစ်တက်ကြတာ ။ ( သိပ်ကြောက်စရာကောင်းတာနော် )
အဲဒီမျက်စောင်းက အမျိုးမျိုးရှိတယ် ။ မူကွဲတွေပေါ့ အချစ်မျက်စောင်း ၊ အမုန်းမျက်စောင်း ၊ ရောစွပ်မျက်စောင်း ၊ —- (ရောစွပ်မျက်စောင်း ဆိုတာအရေးကြီးတယ် — ဘာသာပြန်မှန်ဖို့လိုတယ် ။ ချစ်သလိုလို မုန်းသလိုလို ဘာကြီးမှန်းကို မသိတဲ့ မျက်စောင်းမျိုးလေ – ဘာသာပြန်များ အကောက်လွဲလို့ကတော့ (တတိယ လက်နက်စာမိသွားမယ် )
၃။ လက်ဝါး ၊ လက်သီးဆုပ် ၊ လက်ဝါးစောင်း – တွေပဲ
သူကလည်း မူကွဲတွေများတယ် ၊ လက်ဝါးပြရင်နှစ်မျိုးတွေးလို့ရတယ် ( မဟော်သဓာ ဇာတ်တော်နဲ့ တစ်မျိုးတွေး ) လက်သီးဆုပ်ပြရင်လည်း နှစ်မျိုးတွေးလို့ရတယ် — အဲ — လက်သီးဆုပ်ကြီးနဲ့ ကိုယ့်ရင်ဘက်ကြီးကို ဖွဖွလေးလာထု ရင်တော့ – - တစ်မျိုးတည်းသာတွေးလိုက်တော့ – - အိုကေ — ပြေလည်ပြီလို့မှတ် အဲဒီ လက်သီးဆုပ်လေးကို ဖမ်း – ပြီး ဖွဖွလေးသာ နမ်းလိုက် — – ရဲရဲသာလုပ် — – အာမခံတယ် — – အဆင်ပြေလိမ့်မယ် ။
၄။ ရင်ဘက်စည်တီး အော်ကြီးဟစ်ကျယ် လုပ်တက်ခြင်း
အဲဒီလက်နက်ကလည်း ကြောက်စရ်ာတော်တော် ကောင်းတယ် ။ အရှက်ဟက်တတ်ကွဲစေမဲ့ လက်နက် ( နျူးက – လီးယားလက်နက်ထက်ပြင်းတယ် )
၅။ မျတ်ရည်လေ — မျတ်ရည် လက်နက်
ဒါနောက်ဆုံးလက်နက်ပဲ မျတ်ရည်ယို ဗုံးခွဲတက်သေးတာ မျတ်ရည်လေ — မျတ်ရည် ဘာပေါသလဲမမေးနဲ့ သူ့ကို မနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် မျတ်ရည်လေးစမ်းစမ်း စမ်းစမ်းနဲ့ လုပ်ပစ်လိုက်ကြတာ သွားရော — အကုန်ကြွေပေတော့ — လူပါပေါင်ပေးချင်စိတ်ပေါက်သွားလိမ့်မယ် — ဒါမှမဟုတ် ဘေးက ကိုယ့်ကို ၀ိုင်းရိုက်ချင်စိတ် ပေါက်သွားစေနိုင်တယ်
( ကဲ — အဲဒါက ယောက်ျားတွေ ဂရုစိုက်ရမဲ့ မိန်းမလက်နက် (၅)ဖြာပဲ —– )
မင်းခန့်သူ ( ကိုးမြေ )
Posted by minkhantthu at 11:39 PM No comments:
ကျောက်ဆည်မြို့အလှ (တောင်တွင်းသူလေး ကဗျာပါ)
တောင်တွင်းသူလေး ပုလဲက သူမွေးနေ့မှာ ဒီကဗျာလေးကို ကျွန်တော် ဆိုက်မှာ တင်ပေးဖို့
ပြောတယ်လေ ကျွန်တော် အမှတ်တရ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
မွေးနေ့ရှင် ညီမလေး မွေးနေ့မှစ၍ ပျော်ရွှင်သော နေ့သစ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ
Posted by minkhantthu at 5:01 AM No comments:
ငါ့ရဲ့ အပြာရောင် ဒိုင်ယာရီထဲမှာ
ရယ်စရာလေးတွေ ပြောတတ်တဲ့ နင့်ကို
အတွေ့အကြုံတွေ ပေးခဲ့တဲ့ နင့်ကို
ငါဘယ်လို မေ့လို့ရမှာလဲ ။
မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ရုန်းကန်နေရတဲ့ ငါက
ပြောမထွက်ခဲ့တဲ့ စကားလုံးတွေ အတွက်
ပြန်တွေးစရာ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ မရှိခဲ့ရင်
ငါ့မျတ်ဝန်းတွေ ရီဝေနေမှာ မဟုတ်ဘူး
ငါအခါခါ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ် ။
ငါတို့ရဲ့ တွေ့ဆုံခွင့် နောက်တစ်နေ့
ငါတို့အမေစိုက်ထားတဲ့ သရက်ပင်ကို လွမ်းတာထက်
ငါနင့်ကို ပိုလွမ်းတတ်တာကိုတော့ ငါဝန်ခံပါရစေဟာ ။ ။
Posted by minkhantthu at 11:12 PM No comments:
သြော် . . . ငါဟာ
တကယ်တော့ ငါဟာ ငါပဲ
တစ်ခါတစ်လေ ကမောက်ကမ ဖြစ်လို့
ထူးစမ်းပါပေ့ . . . . . . . . . . . . ရယ်
မင်းကိုထိအောင် ပစ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး
ဘာ့ကြောင့်လည်း . . .
ကိုယ်တောင်းဆိုပါရစေ . . . . . . . . . ရေ
မင်းရဲ့ မှော်ဆန်ဆန် ပြကွပ်တွေကို
နောက်ထပ် . . . . . . . . . .
ရုံတင်မပြသပါနဲ့လို့ . . . . . .။ ။
Posted by minkhantthu at 10:22 PM No comments:
ကဲ . . . လာစမ်းကံကြမ္မာ
အရှုံးတွေနဲ့ နေသားကျနေတဲ့ ငါ့အတွက်တော့
ဒါပေမယ့် . . . ညီမလေးရယ် ။ ။
Chatting နဲ့ blogs တွေအကြောင်း
ဖန်ချိုကျစိမ့် (ဟဲဟဲ အရောလေးပါ) တွေကြားမှာ
ကြယ်တွေနဲ့အတူ ရှင်သန်နေအုံးမှာပါ ။ ။
Posted by minkhantthu at 10:20 PM No comments:
ဒီည . . .
ကျွန်တော်ကလည်း တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်
ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော်အတွေးနဲ့ ကျွန်တော်
ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်ကလည်း အတွေးလေးနဲ့
ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းက လာနေတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့တွေတယ်
“ကျွန်တော်တို့ လွတ်လတ်မှု ပန်းတိုင်ကို သွားမလို့ မိတ်ဆွေကော
ဘယ်ကပြန်လာတာလဲ လွတ်လတ်မှုပန်းတိုင်က ပြန်လာတာလား ”
ဟိုမှာ လွတ်လွတ်လတ်လတ် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်
ဘ၀လေးထဲမှာ နေရောပေါ့ ”
““ဒီမှာ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း . . .
သူငယ်ချင်း . . . မှတ်ထား
ငါသိခဲ့တာကွ ” တဲ့
“ ဘယ်လို့ . . . ဘယ်လို . . . ဘယ်လို . . .”
ဘ၀ဆိုတာ အခက်အခဲတွေ . . . . . .
. . . . . . . ရှိမှ ပျော်စရာကောင်းတာတဲ့လား
ကျွန်တော်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ကို . . . . . . သွားပြီး . . ။
လက်တစ်ဆစ်စာ ရယူမှုနဲ့ ရောင်ရဲသူပါ
Posted by minkhantthu at 10:18 PM No comments:
တစ်ခုတည်းသော ငါ့ရဲ့ မှီခိုရာကို
သူရဲ့ ခင်မင်မှုကို ရဖို့
ငါ့ကို ကျိုချက်ရတဲ့ စိတ္တဇညများ
လောကကြီးရဲ့ နာကျင်ကျင် အကြည့်များ
အားလုံး အားလုံးကို ငါရတယ်
သူရိုးသားသွားမှာပါ ။ ။
Posted by minkhantthu at 10:17 PM No comments:
နွေ မိုး ဆောင်း အလီလီပြောင်း
ငတ်တစ်လှည့် ပျတ်တစ်လှည့် ဘဝေလေးတွေနဲ့
ဒီဇင်ဘာ (၁၄) ရက်ကို
Internet ဆိုတဲ့ ကွန်ယက်မှာ
တို့ရဲ့ friendsdaygroup ဟာ
ဥပေက္ခာ ပြုတတ်တဲ့ ညီမင်းခ
တာဝန်ယူနေသော Admin ဖြစ်တဲ့
ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ရဲ့ ကိုကြီး ဂျေဂျူဝိုင်
ခွန်ပဇ္ဇုန် နဲ့ ခွန်ရာဇာ
ငွေမရှိတဲ့ တို့ဘ၀ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ
ထင်ပေါ်နေတဲ့ friendsdaygroup ကိုကြည့်ပြီး
14.12.2010 ဒီဇင်ဘာ (၁၄) ရက်လည်း
ငါတို့ရဲ့ ငတ်တစ်လှည့် ပျတ်တစ်လှည့်
Posted by minkhantthu at 10:16 PM No comments:
၁။ ပုဆိုးတန်းတင် ထိမ်းမြားခြင်း
သတိုးသားသတိုးသမီး နှစ်ဦးတို့သည် ပရိတ်သတ်အလယ်သို့မထွက်ဘဲ မိမိတို့အိမ်မှာသာ လွတ်လပ်စွာနေကြပြီး
ပရိတ်သတ်များ စားသောက်ပြီး၍ ပြန်သွားသောအခါမှ သတို့သမီး၏ အိပ်ခန်းအတွင်းရှိ ကြိုးတန်း၌ သတိုးသား ပုဆိုး
၂။ လက်ဆုံထမင်းစား ထိမ်းမြားခြင်း
သတို့သား၊ သတို့သမီးတို့သည် ထမင်း (သို့မဟုတ်) မုန့်ပဲသွားရည်စာများကို လူကြီး မိဘများရှေ့မောက်၌
၃။ လက်စွပ်လဲလှယ်၍ ထိမ်းမြားခြင်း
သတို့သားဝတ်ဆင်သော လက်စွပ်ကို သတို့သမီးသို့ပေးပြီး ၀တ်ဆင်ပေးခြင်း၊ သတို့သမီး ၀တ်ဆင်သော လက်စွပ်ကို
၄။ အ၀တ်ပေး၍ ထိမ်းမြားခြင်း
သတိုးသားက သတိုးသမီးအိမ်သို့သွားသည့်အခါ သတိုးသမီး၏ ဆွေမျိုးများက သတိုးသားအား ရေချိုးစေပြီး အ၀တ်ပုဆိုး
၅။ လက်ထပ်၍ ထိမ်းမြားခြင်း
သတို့သမီး၏ လက်ယာလက်ကိုဖြန့်စေ၍ သတို့သား၏ လက်ယာလက်ကို အပေါ်မှာတင်စေပြီး ဘိသိတ်ဆရာဖြစ်စေ၊
လူကြီးလူကောင်းတစ်ဦးဦးကဖြစ်စေ ပရိတ်သတ်အလည်တွင် ထိမ်းမြားပေးခြင်းသည်။
၆။ ဒါလီဖွဲ့၍ ထိမ်းမြားခြင်း
သတို့သား သတို့သမီး နှစ်ဦးစလုံး၏ ဦးခေါင်း ဆံ့ဝင်လောက်အောင် စွပ်ရသော ရွှေဆွဲကြိုးကို ပန်းကုံးသဖွယ်ပြုလုပ်၍
သတို့သား သတို့သမီး နှစ်ဦးစလုံးအား တစ်ခါတည်း စွပ်ပေး၍ ထိမ်းမြားခြင်းဖြစ်သည်။
၇။ စုလျားရစ်ပတ် ထိမ်းမြားခြင်း
သတို့သမီး လွှားခြုံထားသော စုလျားတစ်ဘက် (သို့မဟုတ်) ပုဝါကို သတို့သား သတို့သမီး နှစ်ဦးက ရစ်ပတ်၍
သတို့သား သတို့သမီးတို့ ရှေ့ဦးစွာ ပန်းကုံးအား တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး လဲလှယ်၍ စွပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
၉။ ရေခွက်၌လက်ဆုံချ၍ ထိမ်းမြားခြင်း
ရေထည့်ထားသော ရေခွက် ၊ ရေဖလားတွင် မင်္ဂလာရှိသော အောင်သပြေ ပန်းများထည့်၍ သတို့သား သတို့သမီးတို့၏
လက်ယာလက်များကို ချထားစေ၍ ထိမ်းမြားခြင်းဖြစ်သည်။
၁၀။ ဦးထိပ်၌ ရေစင်သွန်း၍ ထိမ်းမြားခြင်း
ရွှေခွက်၊ ငွေခွက်၊ ဖန်ခွက်၊ စသည်တို့၌ န၀ရက်ကိုးသွယ် နံ့သာမျိုးငါးပါးတို့ကို သွေးထည့်ပြီး သတို့သား သတို့သမီးတို့၏
ဦးခေါင်းထက်မှ သပြေခက်နှင့် ဖျန်းပတ်သွန်းလောင်း၍ ထိမ်းမြားခြင်းဖြစ်သည်။
မှတ်ချက် = ဒီဆောင်းပါးကို စာရေးဆရာ ဆရာ “ လူနေ´´ ရေးသော “ချစ်သူရွာ´´ စာအုပ်မှ
ကျောက်ဆည်တောင်ပေါ်က ရပ်တော်မူလေးဆူး (မြတ်လေးဆူ ဘုရား)
သူငယ်ချင်းဆိုတာ ဘုရားပေးတဲ့လက်ဆောင် ချစ်သူဆိုတာ မြှားနတ်မောင်ပေးတဲ့လက်ဆောင် မြှားနတ်မောင်ပေးတဲ့ လက်ဆောင်ကို ပစ်ပယ်ချင်ပစ်ပယ်လို့ရမယ် ဘုရားပေးတဲ့ လက်ဆောင်ကိုတော့ မပစ်ပယ်သင့်ဘူးလေ
လူတိုင်းကို ကိုယ်ထက်သာတယ်လို့ အမြဲ မှတ်ယူတယ်
ကျောက်ဆည်မြို့ရဲ့ ရွှေသာလျောင်းတောင်တော် (နှစ်စဉ် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့) ဆင်လှူပွဲတော် ကျင့်ပါ့သည်
ဆင်ပွဲကျင်းပရာ ရွှေသာလျောင်တောင်ခြေ ဗဟိုမဏ္ဍပ်
သီတင်းကျွတ်လ ကျောက်ဆည် ဆင်ပွဲကျင်းပရာ ရွှေသာလျှောင်းတောင် ဗဟိုမဏ္ဍပ်မှာ ပြိုင်ပွဲဝင်နေသည့် ရိုးရာဆင်ကို ကြည့်နေသည့် ပရိတ်သတ်များ
2011 ဆင်ပွဲ မြင်ကွင်း
လူတစ်ယောက်ကို လိမ်၇တာလွယ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် သူ့ကိုလိမ်နိုင်တယ်လို့ ထင်နေတဲ့ယူ၇ဲ့ စိတ်ကိုတော့ မလ်ိမ်ပါနဲံ
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ရယ်စရာ ဟာသလေးတွေရှိပါတယ် ဒါပေမ်ယ့် ကျွန်တော် မရယ်ခဲ့ပါဘူး ကျွန်တော်မှာလဲ ရယ်စရာဟာသလေးတွေ ရှိနေမယ်ထင်လို့ပါ
minkhantthu.mdy@gmail.com နဲ့ minkhantthu.kse@gmail.com ဒါကတော့ ဖေ့ဘွတ်လိပ်စာပါ https://facebook.com/minkhantthuu
Titan Poker | 888 | Dating site | Online Counter | ONLINE CASINO IN SINGAPORE
ရေးထားသမျှ Post များ
မောက်လှလှလေးတွေ ဆိုဒ်မှာ ထားရအောင်